aniga oo ka mid dadka ka dhadhay somaliland balseaan ku barabaarin
Alexa Internet, Inc waa California-based shirkadda kabista ah ee Amazon.com kaas oo bixiya macluumaadka gaadiidka web ganacsi. Waxaa la asaasay sida shirkad madax bannaan ee 1996, Alexa uu soo ifbaxay by Amazon ee 1999. Its Toolbar ururiya xogta ku saabsan hab dhaqanka Browsing iyo waxa gudbiya si website Alexa ka, halkaasoo lagu kaydiyo oo la qiimeeyay, la xirrira aasaas u ah warbixinta gaadiidka web ah ee shirkadda. Sida of 2014, Alexa bixisaa macluumaadka gaadiidka, liiska caalamiga ah iyo macluumaad kale oo ku saabsan 30 million websites, iyo website-waxaa la booqday by weyn 8.8 milyan oo qof bil walba.
Ermeniya: Հայաստան, translit. Hayastan, IPA: [hɑjɑstɑn]), si rasmi ah Jamhuuriyadda Armenia (Erman: ermen: Հայաստանի Հանրապետություն, translation. Hayastani Hanrapetut'yun, IPA: [hɑjɑstɑni hɑnɾɑpɛtutʰjun]), waa waddan ku yaal gobolka Koofurta Caucasus ee Eurasia. Waxaa ku yaala galbeedka Aasiya  ee ku yaala Jasiiradaha Erman, waxaa xuduud la leh Turkiga galbeedka, Georgia waqooyiga, xaqiiqda madaxbannaan ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah iyo Azerbaayadaha bari, iyo Iran iyo Azerbaijan oo ka baxsan Nakhchivan koonfurta. 
Ergayga Ergaygu waa mid madaxbannaan, badan oo xisbi qaran oo leh dhaqan dhaqameed. Urartu waxaa la aasaasay 860 BC iyo qarnigii 6aad ee BC waxa lagu beddelay Satrapy Armenia. Boqortooyada Armenia waxay gaartay heerkeedii Tigranes ee Weyn ee qarnigii 1aad ee qarnigii 21aadna waxay noqotay waddanka ugu horreeya ee dunida oo dhan lagu dhaqmo diinta rasmiga ah ee dabayaaqada 3aad ama horraantii 4aad AD.   Taariikhda rasmiga ah ee aqbalaadda dawlad-goboleedku waa 301.  Boqortooyada Ereyga ah ee qadiimka ah ayaa kala qaybisay Byzantine iyo Sasanian Empires wareeggii qarnigii 5aad. Sida ku xusan barxada Bagratuni, Boqortooyada Bagratid ee Armenia waxaa lagu soo celiyay qarnigii 9aad. Diidmada oo ay sababtay dagaallada ka dhanka ah Beniantiin, boqortooyadu waxay ku dhufteen 1045, Ereyga waxaa ugu dambeeyay markii ay soo weerareen Turjubaanka Turki. Ereyga Ereyga ah iyo Boqortooyada Ciliga Armenia waxay ku taallaa xeebta badda Mediterranean intii u dhaxaysay qarniyadii 11aad iyo 14aad.
Balwo (Af-Carabi: بلوه) waa nooc ka mid ah heesaha Soomaalida. Balwo waa heesihii ugu horeeyay ee jacayl iyo kalgacal ku salaysan kuwaasi oo muusik loo garaaco. Markii ugu horeeysay, heesahan waxaa sameeyay Aabaha Fanka Soomaalida Cabdi Deeqsi Warfa. Heesaha Balwo waxay ka bilaabmeen magaalada Borama, gobolka Awdal wakhti lagu qiyaaso intii u dhaxaysay 1940 ilaa 1945kii.
Boland (Af-Bolandi: Polska) ama Jamhuuriyadda Boland (Af-Bolandi: Rzeczpospolita Polska) waa wadan ku yaalo bartamaha Yurub.
Dalka jamhuuriyada Boland. Dalka Poland waxa uu kamid yahay wadamada qaarada yurub gaar ahaan kuwa dhaca badhtamaha. Dalalka la jaarka ah dalka Poland waxa kamid ah jarmalka (Jarmal, Ukrain, Belarus, Islofaakiya,Jamhuuriyadda Tashik
U bood: gooshitaan, raadi , Ruushka (Russia) iyo Lithuaniya. Dhinca waqooyi galbeedna waxa kaga talaa bada Baltic-ga (Baltic Sea). Caasimada dalka Boland waxa layidhaa Warsaw.
Budhcad badeeda geeska afrika
Burcad badeeda geeska afrika waa tuugo maraakiibta afduubato. Waxeyna bilaabatay 2004tii, waa markii ay kaluumeesatada u dulqaadan waayeen maraakiibta shisheeye oo kaluunka ka xaluufsato xeebaha dalka iyo markii ay badda soo tuftay suntii nuclearka ahaa xiligii ay soomaaliya soo gaartay tsunaamigii ka dhacay qaarada aasiya.Burcad badeeda waxey maanta dhib ku haayaan shacabka soomaaliyeed, waxaana taas ugu wacan lacagaha malaayiinta doollarka ah oo la siiyo. burcad badeedaan waxey maraakiib ka soo afduubtaan biyaha ka baxsan xeebaha soomaaliya.
Caynaan (Af-Ingiriis: Ainan; Af-Carabi: عينان) waa magac Soomaaliyeed kaasi oo loo bixiyo ragga.
Dabayaaqadii bishii February 1996, waxaa degmada Caynaba shir uga furmay beelaha Bariga Burco. Shirkaas oo loo bixiyay “Caynaan” wuxuu idlaaday 14-kii April 1996. Waxa lagu doortay 33 xubnood oo guddi ah oo loo bixiyey “Hoggaan.” Waxa Guddoomiyaha Guddida loo doortay Cismaan Maxamuud Jaamac (Dawiil) oo ahaa nin aad u caqli badan xeer beegtina ah.
Qodobbadii shirkaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in ay beeshaasi hormuud ka noqoto nabadaynta iyo soo-af-jaridda colaadda ka oogan Somaliland. Shirkaas Caynaan waxa ku xigay shirarkii Nabadaynta ee Beer, Duruqsi, iyo Shirweynihii Beelaha Soomaalilaan ee Hargeysa. Halkaas oo Madaxweyne loogu doortay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal November 23-1997.
Haweeni [həvɐjʔi]) waa gobolka 50-aad ee ugu dambeeyay ee ku biiray Maraykanka, isagoo helay dowladnimada 21-kii Agoosto, 1959. [ 10] Hawaii waa gobolka keliya ee Maraykanka ku yaala Oia Galbeed iyo kan keliya oo ka kooban jasiiradaha oo dhan. Waa jasiiradda waqooyiga ee ku taala Polynesia, oo ku taal inta badan jasiiradaha ku yaal bartamaha bartamaha badda. Hawaii waa gobolka keliya ee Maraykanka ku yaal dibedda Waqooyiga Ameerika.
Dabiicadda dabiiciga ah ee Hawaii, cimilada kulaylaha, kulaylka dadwaynaha, hareeraha xeebta, iyo volcanoes firfircoon waxay ka dhigtaa meel caan ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha, foorjoogayaal, bayoolaji yaqaanno, iyo faytopoolayaal. Sababtoo ah xaafadeeda bartamaha Pacific iyo qarniga 19-aad ee hijradda shaqada, dhaqanka Hawaii waxaa si aad ah u saameynaya dhaqamada Waqooyiga Ameerika iyo Asian, marka laga reebo dhaqanka dhaqameed ee Hawaiian. Hawaii waxay haysataa in ka badan hal milyan oo deggan oo joogto ah, oo ay la socdaan martida badan iyo shaqaale milatari oo Mareykan ah. Caasimaddu waa Honolulu jasiiradda O'ahu.
Hawaii waa dalkii ugu yaraa ee 8aad iyo kan ugu yar ee 11-aad, laakiin 13-aad ee ugu baahsan dadweynaha 50-ka gobol ee Maraykanka. Waa waddanka kaliya ee leh jamacad Asia. Xeebta gobolka ee ku taala xeebta waa qiyaastii 750 mayl (1,210 km), oo ah kii ugu dheeraa afaraad ee Maraykanka ka dib markii xeebaha Alaska, Florida, iyo California.
Jaamacada Camuud (Af-Ingiriis: Amoud University; Af-Carabi: جامعة عمود) waa jaamacad weyn oo ku taala 5 km waqooyi bari magaalada Borama ee gobolka Awdal, Somaliland. Jaamacada Camuud waxay ku taala deegaanka beeroleyda ah ee Camuud taasi oo 5 km ka baxsan magaalada Borama.Dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya burburiyey ka dib, sanadkii 1996 ayaa guuto aqoonyahano, waxgarad, ganacsato iyo bulsho weynta reer Awdal garteen ineey aasaasaan Jaamacada Camuud, taasi oo hooy looga dhigay meeshii uu ku yaalay dugsigii sare ee Camuud oo wakhtigaas xidhnaa.
Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 1998dii ayaa jaamacada la furey ayadoo lagu bilaabay 66 ardey, labo waaxood (Kuliyada Waxbarashada iyo Waaxda Maamulka & Ganacsiga), iyo sadex professor.Guud ahaan, 18 sano ka dib wakhtigii la aasaasay, maanta Jaamacada Camuud waxay leedahay 9 kuliyadood (faculty) ay ka mid tahay Kuliyada Caafimaadka oo ardeydii ugu horeeysay ee dhakhaatiir ah ka qalinjebisay sanadkii 2007da; in ka badan 4,000 ardey, iyo 238 prof., macalin iyo shaqaale kale.
Qaramada Midoobay (Af-Ingiriis: The United Nations Organization; Af-Carabi: الأمم المتحدة) sida saxda ah lagu magacaabo "Ururka Qaramada Midoobay", waa urur caalami ah oo ka dhexeeya dalalka aduunka kaasi oo fadhigiisu yahay caasimada New York cariga Maraykanka. Ururka Qaramada Midoobay waxa la aasaasay Oktoobar 24, 1945 si loogu badalo ururkii ka horeeyay ee "Midowga Umadaha" (League of Nations). Ujeedada iyo hadafka Qaramada Midoobay wuxuu ahaa in uu ka shaqeeyo xidhiidhka wadanada xubnaha ka ah iyo in uu ka hortago dagaal ka qarxa wadanada caalamka.
Socdaalka Soomaaliya (Af-Ingiriis: Transport in Somalia) waa adeega socdaalka laga helo wadanka Soomaaliya. In kastoo adeegani hakaday wakhtigii dagaalkii sokeeye wuxuu ka kooban yahay wadooyinka waaweyn, gegooyinka diyaaradaha iyo dekado. Intaasi waxaa dheer adeegyo khaas ah oo iskugu jira dhulka, cirka iyo badaha.
MADAXWEYNAYAALAadan Cabdullah Cusmaan
1 Jul 1960 - 10 Jun 1967Cabdirashiid Cali Sharmaarke
30 Jan 2009 - Hadda
RA'IISULWASAARAYAALMaxamad Xaji Ibrahim Cigaal
4.(2001) | 5.(1860) | 6.(1829). Beeraha & Macdanta Som 
Prof. GalayrAug 13, 2000 - Waxaa dhidibada loo taagey dawladii kumeel gaarka ahayd, dawladaas oo la siiyey muddo saddex sano ah in ay heshiis ka dhex dhaliso dadka Soomaaliyeed. Waxaa dawladaas madaxweyne u noqday C/Qaasim Salaad Xasan, ra'iisul wasaarena Cali Khaliif Galayr.
January 31, 2007: Guddoomiyiha Baarlamaanka DFKMG waxaa loo doortay Shiikh Aadan Madoobe.. [10-Musharax ayaa isku soo taagtay Xilka Gudoominimada Baarlamaanka waxaana markiiba iska casilay 3-Musharax, waxaana tartamay 7-Musharax iyadoo Aakhiritaankii ay isugu soo horeen 2-Musharax oo kala ah Shiikh Aadan Madoobe iyo Ibraahim Max’ed Kiish Bur, waxaana 153-cod ku guuleystay Shiikh Aadan Madoobe halka Ibraahim Kiishbuur uu ka keenay 50-cod. Hase yeeshee Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa sheegay in uu weli yahay Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG. “Xilka waxaa dhiibi karaa markii si cadaalad ah la’iga qaado oo la raaco Dastuurka” ayuu yiri Shariif Xasan oo sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya uu la heyste u yahay Ciidmada itoobiya. Shariif Xasan wuxuu sheegey inuu sii wadi doono howlihii dib u hashiisiinta ee uu ka dhex waday Bulshada Soomaaliyeed wxa uuna ku tilmaamay doorashada Gudoomiyanimda ee Shiikh Aadan Madoo.
(Af-Ingiriis: History of Somalia; Af-Carabi: تاريخ الصومال aṣ-Ṣūmāl), sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya (Af-Soomaali: 'Federal Republic of Somalia', Af-Carabi: جمهورية الصومال الفدرالية Jumhūriyyat aṣ-Ṣūmāl al-Fideraaliya) wakhtiyadii hore loo yaqaanay Jamhuuriyada Dimuqraadiga Soomaaliya, waa wadan dhaca Geeska Afrika.Dhulka Soomaaliya wuxuu weligiisba ahaa xarun dhexe oo maamusha ganacsiga qeybo badan oo dunida ka mid ah, Intasi waxaa dheer, waxaa deegaanka Soomaalidu ahayd mid wax soo saar leh; xaga beeraha, xoolaha iyo kheyraad kale oo dunida inteeda kale ka manaafacaadsato. Siday ay isku raaceen in badan oo taariikhyano ah, Geeska Afrika wuxuu xidhiidh la lahaa Boqortooyadii Faraaciyiinta wakhti imika laga joogo ilaa 3,000 sano, kuwaasi oo ganacsi toos ah la lahaa meelo badan oo ka mid tahay Saylac iyo Dhulka uduga (Puntland).Si kastaba ha ahaatee, wakhtiyadii dhexe waxaa soo shaacbaxay boqortooyooyin Soomaali ah kuwaasi oo ku salaysan beelo iyo deegaan. Saldanadii Cadal, Saldanada Geledi, Saldanadii Warsangali iyo Saldanadii Majeerteen waxay ka mid yihiin kuwa ugu awooda badnaa ee wakhtiyadii dhexe ka ariminayay deegaanka Soomaalida. Dhamaan boqortooyooyinkani waxay horumar ku sameeyeen xidhiidhka ganacsi iyo siyaasadeed ee mandaqada Geeska Afrika la lahayn dunida inteeda kale.